‘सीधाकुरा’को स्टुडियो मै आए कुलमान-रविले गरे सलाम, ‘दिपावली विशेष एपिसोड’ (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, २२ कात्तिक । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज २९९ औं एपिसोड हो । आजको एपिसोड विशेष एपिासेड बनेको छ । आजको एपिसोडमा कुनै रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छैन, भने फोन मार्फत प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छैन ।
आजको एपिसोडमा १२ देखि १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई मुक्त गराउन सफल नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग विशेष कुराकानी गरिएको छ ।
तपाईको कुनै व्यक्तिगत कारण बाहेक विजुली बत्तीको कारण यो तिहारमा तपाईको घर अँध्यारो छैन । अर्थात उज्यालोको यो पर्व तिहारमा तपाईको घरमा विजुलीबाट बल्ने थरि थरिका बत्तीहरु चम्किरहेको छ ।
एक छिन् २ वर्ष अघिको तिहारलाई सम्झिनुहोस् । १२ देखि १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ । भुक्किएर एकैछिन् आएमा खाना पकाउने कि पानीको मोटर चलाउने कि, मोबाइल, इन्भरटर चार्ज गर्ने ? कि झिलिमिली बत्ती बाल्ने ? लगाएतका तनावमै अधिकांश समय खर्च भएको हुन्थ्यो । घर अँध्यारै थियो । सबै अस्तव्यस्त थियो ।